17+ Meelaha ugu Fiican ee Xor u ah Qorayaasha 2022 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 17+ Meelaha ugu Fiican ee Madax -bannaan ee Qorayaasha 2022 -ka
Isha Sawirka: Oleksii - stock.adobe.com
Haddii aad leedahay ereyo aad u macaan oo aad ku raaxaysato qorista, waxaa laga yaabaa inaad ka fekerto inaad raadsato fursado qoritaan oo iskood ah. Qorayaasha madaxa -bannaan waxay mashaariic kala duwan ka qaadan karaan loo -shaqeeyayaal kala duwan iyada oo loo marayo mid kasta oo ka mid ah meelahan xorta ah ee qorayaasha, taas oo noqon karta xiisad dhinac xiiso leh ama abuuri karta xirfad dabacsan.
Qorayaal badan oo hammi leh ayaa diiradda saaraya meel gaar ah sababtoo ah xiisahooda iyo khibradahooda waxayna qaataan mashruucyo hal ama dhowr nooc oo qoraal ah.
Tani waxay kuu horseedi kartaa inaad u qorto nuqul ka mid ah mareegaha ganacsiyada maxaliga ah, blogging ku saabsan hiwaayadahaaga, la shaqaynta kanaallada warbaahinta bulshada, ama qorista joornaalada internetka ama daabacaadda.
Qoraalka, waxaan kaga hadli doonnaa qaar ka mid ah aaladaha iskood u shaqeysta ee qorayaasha la heli karo.
Waa kuma Qoraa Madax -bannaan?
Asal ahaan, qoraa madax-bannaan waa qof daba-socda xirfad-qoris oo aan lahayn ballan-qaad dheer oo loo-shaqeeye. Qoraa madaxbanaan waa mid isaga wax u qora ama macmiil u ah. Waxay u badan tahay inay lacag ka helaan mashaariicda qorista shaqadooda.
Lacag Ma Ku Samayn Kartaa Qoritaan Madaxbanaan?
Qorista madaxa-bannaan waxay noqon kartaa hab fantastik ah oo lacag lagu sameeyo oo xitaa isu rogi karta dakhli waqti-buuxa ah haddii aad si joogto ah u qaban karto shaqo tayo sare leh.
Wkoofiyadu waa faa'iidooyinka qoraalka madaxbannaan?
Qoraa madax-banaan ahaan, uma baahnid isku-kalsoonaan badan. Ma jiro mushahar bishii, mushahar jirro, ama lacag fasax ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah faa'iidooyinka kuwaas oo aad uga faa'iido badan. Waxaad dooran kartaa saacadahaaga shaqada oo aad xor u tahay inaad doorato takhasuska shaqadaada.
Uma aadi kartid xafiiska maaddaama qorayaasha badankoodu u baahan yihiin qol iyo xiriir internet. Waxaad kaloo dooran kartaa inta saacadood ee aad rabto inaad shaqeyso.
Haddii aad ku soo dhawaato shaqada onlaynka iyada oo loo marayo mareegaha shirkadda, hubso inaad ku darto warqad dabool ah marka aad u soo dirto emayl sharraxaya sababta aad u samaynayso go'aan cajiib ah shaqadan gaarka ah. Muuji xirfadaha iyo waayo -aragnimada khuseeya shuruudaha.
Goobaha madaxbanaan waxay sidoo kale ku abaalmariyaan khabiiro heer sare ah oo leh calaamado la aqoonsan yahay iyo shaqooyin bannaan. Sidaa darteed, waa adiga faa'iidadaada gaarka ah si aad macaamiishaada ugu faraxdo.
Maxay aaladaha iskood u shaqeysta muhiim ugu yihiin qorayaasha?
Waxaa jira aalado iskood u shaqeysta oo halkaas ka jira si loogu xiro shaqaalaha iskood u shaqeysta muuqaallada suurtagalka ah. Shabakadahaani waxay u ahaan karaan shaqo guud oo dhan-mid-mid ah ama niche khaas ah.
Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo qorayaasha madaxa -bannaan ee xirfadda leh oo aan meelna u dhowaan doonin meel kasta. Ka feker - aad bay u badan tahay in meherad kastaa u baahan tahay nuxur qoraal ah, ha noqoto nuqullada mareegaha, emayllada, dhejimaha warbaahinta bulshada, nuqul qorista, iwm.
Xirfadda qorista madaxa -bannaan waxay u baahan tahay shaqo adag, xirfadaha maareynta waqtiga oo wanaagsan, iyo kartida helitaanka heeso cusub. Markaad hesho laxanka oo aad dhisto saldhig macmiil oo joogto ah, qorista madaxbanaanidu waxay noqon kartaa xirfad abaal marin leh.
Goobaha madaxa bannaan ee qorayaasha
Waxaan diyaarinay liisaska meheradaha ugu madax -bannaan ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay qorayaasha raadinaya macaamiisha cusub iyo riwaayadaha. Websaydhadu waxay u oggolaadaan shaqaalaha madaxa-bannaan inay raadiyaan shaqo waqti-dhiman ah iyo mid waqti-buuxa ah.
Waxa kale oo ay u heelan yihiin heerar kala duwan oo dhib ah, markaa waxaad heli kartaa hab cusub oo aad wax ku qorto haddii aad hadda bilaabaysid ama aad khabiir ku tahay warshadaha.
WritersGig waa mid gaar ah, oo si degdeg ah u koraya, oo ah goob madaxbanaan oo loogu talagalay qorayaasha halkaas oo aqoon qoto dheer iyo qoraayaal xirfad leh ay lacag ku heli karaan iyagoo siinaya adeegyo qoraal kumanaan macmiil oo waaweyn.
Sidoo kale waa madal ay iibsadayaashu ku raadin karaan oo ku heli karaan qoraayo karti leh oo heer sare ah si ay u gudbiyaan shaqadooda. In ka badan 1200 oo isticmaale labadii bilood ee ugu horreysay ee la bilaabay, WritersGig waxay caddeysay inay tahay meel loogu tago shaqooyinka qorista xirfadeed.
Iyada oo ay ka badan yihiin kun qoraa oo u heellan adeegsiga websaydhka si ay shaqo u helaan, Fiverr waa mid ka mid ah aaladaha ugu madax -bannaan ee ugu wanaagsan qorayaasha si ay ula xiriiraan macaamiisha iman kara.
Magaca Fiverr wuxuu ka soo jeedaa qiimihii asalka ahaa ee dhammaan adeegyada $ 5 kaliya. Websaydhku wuxuu higsanayaa inuu hagaajiyo hannaanka isku -xirka qorayaasha iyo macaamiisha si wada jir wax -ku -ool ah.
Macaamiishu waxay baaraan liiska qorayaasha madaxa -bannaan ee goobta iyagoo adeegsanaya aaladaha shaandhaynta ee adag si loo helo xalka saxda ah. Waxaad ku shaandhayn kartaa qorayaasha kala duwan qiimaha, shaqada, luqadda, qaabka qorista, iyo qaar kaloo badan.
Waxaad la xiriiri kartaa qoraaga adigoo si fudud u dooranaya profile-kooda haddii aad u maleyneyso inaad xal fiican heshay. Marka shuruudaha mashruuca la dejiyo, macaamiisha ayaa hore u siiya qoraaga.
Waxaad haysataa qiyaastii saddex maalmood si aad u akhrido badeecada la dhammeeyey oo aad go'aansato inaad aqbasho ama diido soo gudbinta mashruuca lacag -celin.
Fiverr wuxuu ku fiican yahay inuu helo qoraayaal ku jira meel gaar ah, maaddaama websaydhku leeyahay qaybo u dhow nooc kasta oo ka mid ah adeegga qorista internetka. Haddii ay tahay turjumaad, qoraal -qoraal, dib -u -qoris qoraal ah, ama qoraal -qoraal, haddii qof qori karo, waxaad u badan tahay inaad ka heli doonto Fiverr qof kuu qori kara.
Upwork, oo hore loogu yiqiinay Odesk, waa mid ka mid ah aaladaha ugu caansan ee madaxbanaan qorayaasha; ma aha oo kaliya qorayaasha laakiin sidoo kale kuwa horumariya webka iyo naqshadeeyayaasha garaafyada.
Waxaad ku bilaabi doontaa inaad daabacdo shaqo leh dhammaan tilmaamaha aad rabto ee tilmaanta. Upwork ayaa markaa falanqayn doonta baahiyahaaga oo kala soocaysa kumanaanka madax -bannaan si ay u doortaan taam habboon.
Waxaad markaa heli doontaa liis gaaban oo ah murashaxiinta Upwork ee ugu fiican ee aad ka dooran karto.
Iyada oo Upwork ah, waxaad ku arki kartaa astaanta codsade kasta iyo sicirka guud, taas oo ka dhigaysa xaqiijinta shahaadooyinka qof kasta oo madax -bannaan oo aad u tayo badan. Waxaad la xiriiri kartaa madaxa -bannaan ee doorashadaada iyo isgaarsiinta adiga oo adeegsanaya biraawsarka iyo barnaamijka moobiilka waa mid dareen leh.
Shaqaalaha xorta ah waxaa la siin karaa saacada ama mashruuc kasta. Qorayaashu waxay caadi ahaan u isticmaalaan goobta shaqooyinka muddada-gaaban, shaqo soo noqnoqda oo lala yeesho macmiil gaar ah, ama xitaa shaqo qandaraas waqti-buuxa ah. Tani waxay la macno tahay in aad heli karto qorayaal raba in lagu siiyo lacag hawlo kala duwan oo kala duwan.
4. Qajaarka Macluumaadka
Qajaarka Macluumaadka wuxuu raacayaa qaab ganacsi oo la mid ah Naqshadaynta Pickle, halkaas oo macaamiishu ay bixiyaan lacag bille ah si ay u helaan weydiimo aan xad lahayn. Xaaladdan oo kale, waxaad u diri kartaa codsiyo aan xad lahayn oo ah codsi shaqo.
Qajaarka Macluumaadka wuxuu ugu fiican yahay macaamiisha raadinaya maqaallo baloog oo fudud, wargeysyada iimaylka, sharraxaadda badeecada, ama bogag soo degitaan oo si wanaagsan loo soo saaray. Markaad soo gasho, waxaad isticmaashaa nidaamka maareynta mashruuca oo la yiraahdo JAR si aad u soo gudbiso weydiimaha mashruuca inta aad rabto.
Marka laga reebo codsiyada aan xadidnayn, waxaad samayn kartaa, qaybta ugu fiican waa in ay jirto lacag siman dhammaan waxyaabaha aad rabto. Dhib ma leh in la ogaado heerka qoraaga ama la maro portals iyo dhexdhexaadin si ay hal lacag u soo diraan.
In kasta oo tayada guud ee mashruuc kasta ay ku xiran tahay qoraaga laguu qoondeeyay, Qajaarka Macluumaadka ayaa ah ikhtiyaarka ugu wax-ku-oolka badan ganacsi kasta ama shirkad kasta oo raadinaysa qoraal qoran oo la awoodi karo.
iWriter waa mid ka mid ah meheradaha ugu madax -bannaan ee ugu wanaagsan ee qorayaasha halkaas jooga taas oo u fududaynaysa bilowgayaasha inay helaan rajooyin. Si aad u gasho, waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foom oo aad buuxiso laba su'aalood oo gaagaaban oo ah 250-eray.
Iyada oo ku xidhan natiijooyinkaaga, waxaad ka dooran kartaa shaqooyinka qorista iyo soo jiidashada macaamiisha cusub. Qorayaasha intooda badani waxay ku bilaabaan kuweenna qoraayaal caadi ah waxayna ku shaqeeyaan jidkooda. Markaad hagaajiso heerkaaga qoraalka iyo xirfadahaaga, waxaad samayn doontaa lacag badan mashruuc kasta.
FlexJobs waa guddi shaqo oo qorayaasha xirfadda leh u adeegsadaan sidii ay u heli lahaayeen macmiil iman kara oo u qori kara muuqaalada. Faa'iidada FlexJobs ayaa ah in dhammaan shaqooyinka bannaan ee bannaan ay dib -u -eegaan oo la xaqiijiyo.
Taasi waxay tidhi, uma baahnid inaad ka walwasho khiyaamada ama si xun u bixinta riwaayadaha. Si aad u isticmaasho masraxa, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso rukunsi lacag -bixin ah si aad u hesho faahfaahinta dalabka.
Qalabkani wuxuu bixiyaa muuqaalo kala duwan oo madax-bannaan, oo ay ku jiraan kaaliyeyaasha farsamada ee horumarinta mashiinka raadinta (SEO), naqshadeeyayaasha shabakada tayada sare leh, qorayaasha, horumarinta software, iyo barnaamijyada.
BloggingPro waxay bixisaa degel shaqo oo internetka ah halkaas oo shirkaduhu ka heli karaan karti madax -bannaan. Si ka duwan FlexJobs, guddiga shaqadani ma laha hannaan xaqiijin, markaa waa inaad adigu iska baadhaa fursadaha iman kara si aad uga fogaato khiyaano. Ganacsatadu waxay bixiyaan 30 $ oo ah dhajinta shaqada 30-ka maalmood ah, iyo shaqaalaha madaxa-bannaan waxay baari karaan oo codsan karaan shaqooyinka goobta bilaash ah.
Websaydhku wuxuu ugu horreyntii loogu talagalay bloggers mana siinayo fursad naqshadeeye madax-bannaan ama noocyo kale oo hal abuur leh. Marka laga soo tago muuqaallada madax-bannaanida, shabakadu waxay sidoo kale bixisaa qoraallo loogu talagalay tafatirka iyo dhajinta shaqooyinka.
Guru waa mid ka mid ah suuqyada xorta ah ee ugu wanaagsan ee lagu helo shaqooyin xor ah. Waxaad abuuri kartaa astaan ​​qoraal oo aad arki kartaa shaqadii hore si macaamiisha cusub u arkaan nooca waxyaabaha aad abuurtay.
Waxa kale oo aad si sahlan u dejin kartaa jadwalkaaga caadiga ah ee degelkan, taas oo ka dhigaysa habka shaqaalaynta iyo ku -dul -socodka. Waxaad dooran kartaa xirfado iyo khibrad si aad astaantaada u muuqato markaad raadineyso shirkado raadinaya adeeg bixiyeyaasha madaxa -bannaan oo leh asalkaaga.
Freelancer.com waa guddi shaqo oo daabaca shaqooyin u furan qorayaasha meheradaha yaryar iyo shirkadaha waaweyn. Sida Upwork -ka, shaqaaluhu waxay awood u siiyaan qorayaasha inay ku tartamaan mashaariicda.
Qaar ka mid ah mashaariicdan ayaa ah bandhigyo hal mar ah halka kuwa kalena ay shaqeyn karaan bilo.
People-Per-Hour waa goob dhisme oo la mid ah Fiverr. Shaqaale -yaqaanka ayaa is qori kara oo abuuri kara astaamo bixiya adeegyadooda makiinada. Madalku wuxuu sahlayaa dib-u-eegista dalabyada iyo dalabyada iyo xitaa wuxuu bixiyaa kanaallo isgaarsiineed oo dhisan si mashaariicda loogu soo wareejiyo dhuumaha.
Websaydhku wuxuu kaloo martigeliyaa tartamada naqshadeynta halkaas oo horumariyayaashu ay ku muujin karaan shaqadooda naqshadeynta inta ay u tartamayaan mashaariicda.
Craigslist maaha goob dhisme oo tayo sare leh, laakiin samir iyo adkaysi, waxa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho gigs qoraal ah oo kaa caawiya bixinta biilasha. Waa inaad fiirisaa khiyaanada iyo shaqooyinka mushaharka yar, laakiin dadaal kugu filan, waxaad sidoo kale heli kartaa xirfado qoraal ah oo kaa caawinaya inaad dhisto faylalkaaga.
Natiijooyinkan ayaa waliba ku kooban gobolkaaga. Iyada oo ku xidhan meesha aad ku nooshahay, fursadaha ayaa laga yaabaa inay khafiif yihiin. Ka fikir Craigslist sidii degel aad ka heli karto shaqooyin dhinac ah ama fursado aad ku dari karto faylalkaaga.
12. Raadiyaha Qoraha
Qoraaga Finder waa shirkad Kobcinta Mashiinka oo isku xirta milkiilayaasha ganacsiga iyo qorayaasha si loo abuuro nuxur. Waxaan had iyo jeer raadineynaa karti qoraal oo cusub dhammaan heerarka adag.
Qorayaasha madaxa -bannaan waxay iska diiwaangelin karaan mareegahayada si ay ugu biiraan keydka xog -hayaha. Waxaan eegi doonnaa fursadaha qoraalka ee suurtogalka ah oo si fiican ugu habboon xirfadahaaga.
13. Mawduuc joogto ah
Mawduuca Joogtada ah waa wakaalad qoraal ah oo ka caawisa shirkadaha inay helaan qoraayaal si ay u abuuraan mareegaha mareegaha warbaahinta bulshada maqaallada blogga. Websaydhku wuxuu leeyahay xog -ururin ka badan 100,000 oo qoraa xirfadlayaal ah kuwaas oo u abuuray waxyaabo ka badan 50,000 oo shirkadood.
Ku billow abuurista astaantaada, adoo iftiiminaya waayo -aragnimadaadii hore iyo xirfadaha qorista. Marka xigta, codso mashaariic ku habboon qoraalkaaga iyo heerka aad rabto.
Markaad ka shaqeyneyso masraxa, waxaad ku dhisi kartaa sumcad iyo xiriir waqti dheer leh sumadaha. Markasta oo aad shaqeyso, way kuu sahlanaan doontaa inaad hormariso xirfaddaada suuqgeynta dijitaalka ah iyo qorista.
Textbroker waa wakaalad kale oo qoraal ah oo qorayaashu isticmaali karaan si ay u helaan macaamiil cusub. Isku qoritaanka qoraaga goobta ayaa gebi ahaanba bilaash ah waxayna ku siineysaa marin u hel kumanaan meelood oo qoraal ah.
Websaydhku wuxuu kaloo daryeelaa lacag -bixinta wuxuuna bixiyaa aalado maareyn mashruuc si uu ula shaqeeyo macaamiisha si sahlan oo hufan. Boggu wuxuu kaloo siiyaa qorayaasha helitaanka aaladda qorista si ay u hagaajiyaan xirfadahooda oo ay jawaab uga helaan waxa ay soo saaraan.
15. Gaaritaanka Qoraaga
Helitaanka Qoraagu waa degel ay meheraduhu ku qori karaan waxyaabaha ku jira. Goobtu waxay ka kooban tahay in ka badan 15,000 oo qoraa kuwaas oo abuuray waraaqo caddaan ah, daraasado kiis, qoraallo blog ah, iyo qaar kaloo badan.
Madalku wuxuu kaloo bixiyaa aalado wax ku ool ah oo ka caawin kara milkiilayaasha meheradda horumarinta webka iyo baarista ereyga muhiimka ah.
Si aad xubin uga noqoto, waa inaad degan tahay US, Australia, Canada, New Zealand, Ireland, South Africa, ama UK. Marka hore waxaad samaysaa profile oo waxaad qaadataa imtixaan qoraal ah.
Khubarada ayaa markaa dib u eegi doona khibradaada iyo xirfadahaaga ka hor inta aysan kugu xirin muuqaalada qoraalka ee suuragalka ah.
16. Iskuulka Daabacaadda
Iskuulka Daabacaadda wuxuu xoogga saaraa caawinta qorayaasha si ay u noqdaan qoraayo iskood isu daabacay. Weligaa miyaad ku fikirtay inaad qorto xusuus -qorkaaga ama laga yaabee inaad ballan ka dhigato aagga aqoontaada?
Raggaani waxay kaa caawin karaan tallaabo kasta oo ka mid ah hagaajinta xirfadahaaga qorista ilaa fahamka soo -saarka buugga, suuq -geynta iyo bilaabidda shaqada jacaylkaaga.
Waxay shabakadooda ku haystaan ​​qalabyo kala duwan, oo ay ku jiraan curiyaha cinwaanka buugga iyo xisaabiyaha lacagta buugga, iyo sidoo kale aqoon isweydaarsiyo lacag la'aan ah oo ku baraya wax badan oo ku saabsan sida loo daabaco sheeko.
Contena waa websaydh qoraal madax -bannaan oo heer sare ah oo loogu talagalay inay ka badan tahay guddi shaqo. Tani waa mid ka mid ah talooyinkayga ugu sarreeya ee loogu talagalay bogagga qorista ee iskood u shaqeysta.
Marka hore, waxay haystaan ​​waxa ay ugu yeeraan "Qorista Shaqeeyaha Qorista," kaas oo si otomaatig ah uga soo uruuriya muuqaallada qorista madaxbannaan ee ugu wanaagsan internetka oo dhan.
Markaa, waad baari kartaa oo kala dhexdhigi kartaa si aad u hesho xulashooyinka ugu fiican-ha ahaato waqti buuxa $ 10,000 bishii oo ah qorista buugga eBook ama boosto hal mar ah oo ku jirta isboortiga. Tani waxay kaa badbaadin doontaa waqti badan oo isku dayaya inaad shaqo ka raadsato degellada kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, iimaylada ogeysiiska ee loo soo diro sanduuqaaga maalinlaha ah waxay kaa badbaadin doonaan xitaa waqti dheeraad ah sababtoo ah waxay ku tusi doonaan oo kaliya shaqooyinka u dhigma shuruudahaaga, sida Qiimaha iyo niches.
Si joogto ah waa madal kale oo madaxbanaan oo qaab-dhismeed u ah qorayaasha kaas oo isku xira wariyeyaasha leh magacyo waaweyn oo haddii kale ay ku adkaan karto inay la qabsadaan.
Si taas loo gaaro, waxay aad ugu dadaalaan inay dib -u -eegaan shaqaalaha madaxa -bannaan ee cusub ee ku soo biiraya goobtooda waxayna doortaan shaqaala -hayeyaasha saxda ah ee lagu casuumo furitaannada shaqo ee kala duwan.
Runtii waxaad u baahan tahay inaad haysato faylal adag si aad u bilowdo oo aadan u noqon karin mid u firfircoon ugaadhsiga shaqada inta aad ka qaban karto aaladaha kale.
LAAKIIN tanaasulkan wuxuu bixiyaa fursad uu kula shaqeeyo shirkadaha waaweyn ee mashaariicda lacag-bixinta badan leh.
Tani waxay ka dhigan tahay in degelkan wax qorista ee madaxa -bannaan uu ugu fiican yahay qorayaasha khibradda leh ee raadinaya inay dhammaystiraan dadaalladooda shaqo -raadinta kale.
Sideed ku noqon kartaa qoraa madax -bannaan?
1. Dhis faylalkaaga internetka
Ku muuji qaababkaaga wax -qorista bogagga shabakadaha madaxa -bannaan si ay kaaga caawiyaan in aad macaamiishaada ku barato qaabka qoraalkaaga iyo tayada shaqada aad bixin karto.
Haddii aad rabto inaad ka abuurto faylalka tacliimeed meel xoqan, waad qori kartaa maqaallada qaarkood oo u daabici kartaa Google Doc ama xitaa ku daabici kartaa mareegaha mareegaha. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale bilaabi kartaa abuurista farriimaha martida oo aad siisaa iskuxirka.
2. Ku dheji dhammaan shaqooyinka qorista
Laga bilaabo guriga, ka raadi dhammaan noocyada shaqo raadinta xorta ah. Liiska maalinlaha ah ee looxyada shaqada ee leh shaqooyin tayo sare leh. Waa inaad marka hore codsatid shaqada adoo isticmaalaya qoraalkaaga dhawaaqa.
Hubi in garoonkaagu istaago. Waxaad ku samayn kartaa tan adoo muujinaya markhaatiyadaada, dhejinta martida, ama kalsoonidaada.
3. Suuq geynta qoraalkaaga
Waxaa jira siyaabo badan oo aad ku suuqgeyn karto adeegyadaada oo aad magacaaga ugu soo bandhigi karto si guud. Waxaad tan ku samayn kartaa adiga oo galaya warbaahinta bulshada oo aad abuureyso qoraallo ama aad raacdo qoraayaal iyo shirkado aad jeceshahay.
Waxaad ka soo degi kartaa inta badan shaqada LinkedIn iyo Twitter. Sidoo kale, qor boostada martidaada oo ku daabac taariikh nololeedka qoraaga.
4. Tag tababarka
Ma lihid shahaado qoraal oo madaxbanaan, laakiin haddii aad ka bilowdo meel xoqan waxaa jira hab aad naftaada ku bari karto inaad qabato shaqo tayo leh.
Raadi fasalka qorista ee internetka haddii aadan haysan waqti aad ku qalinjabiso jaamacad.
5. Ka bilow mashruuc yar.
Helitaanka jagada tifaftirka - ama shaqada - way sahlan tahay in la sheego intii la qaban lahaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira daabacado iyo mareegaha u qora qorayaasha. Markaad hesho boos waqti-buuxa ah, waxaad heleysaa faa'iidooyin aan laga soo kaban karin iyo bilowga cajiibka ah ee ganacsigaaga.
Waxaa sii dheer, haddii aad dhib ku qabtid inaad mashaariic waaweyn ka hesho dhulka, waxaad had iyo jeer ku bilaabi kartaa mashruuc yar si aad u dhisto xawaare.
Waa maxay tayada aad u baahan tahay Qoraa Madaxbanaan?
Haddii aad rabto inaad ku fiicnaato shaqooyinka qorista ee madaxa -bannaan, waxaad u baahan tahay inaad noqoto qof aqoon leh. Waxaad shaqaalaysiin doontaa macmiil kaliya haddii ay rumaystaan ​​inaad qabato shaqo tayo wanaagsan leh. Markaa waa inaad waqtigaaga qaadataa.
Is waydii sababta aad u doonayso inaad shaqada u qabato. Haddii aad sidaas uun u samaynayso, waxaa laga yaabaa inaad soo saarto shaqo tayadeedu hooseyso oo aan rafcaan ka qaadan doonin macaamiishaada.
Si aad shaqo weyn u qabato si joogto ah, waxaad u baahan tahay inaad wax badan barato. Sii wad horumarinta xirfadahaaga maadaama aad rabto inaad sii haysato oo aad soo jiidato macaamiisha cusub.
Kalsoonidu waa muhiim marka lala macaamilayo macaamiisha. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in macaamiishaadu ay ku kalsoon yihiin nooca waxyaabaha aad soo saarto. Waa inaad tustaa macaamilka inaad taqaan mashruuca. Marna ha tusin macmiilka in aadan hubin waxa lagaa filayo.
Markaad hesho mashruuc aad ku shaqayso, si kasta oo fikraddu u cusub tahay, qaado shaqada oo u xaqiiji inaad samayn karto. Tani waxay sidoo kale khuseysaa haddii macmiilku codsaday waraysi. Furaha helitaanka shaqo waa aaminaad.
Macaamiishu waxay jecel yihiin la shaqaynta qorayaasha lagu kalsoon yahay. Tus macaamiishaada inay kugu aamini karaan inaad shaqada gaarsiiso waqtigeeda. Had iyo jeer ilaali eraygaaga oo macaamiishaadu way soo laaban doonaan. Tusaale ahaan, haddii aad shaqo aqbasho oo aad oggolaato inaad shaqada gaarsiiso maalin cayiman, fadlan ku dhiib waqtigeeda.
Ha sugin macaamilka inuu sugo maadaama ay ku tusayso inaadan ahayn qoraa la isku hallayn karo. Haddii aad shaqada hore uga tagto, way kuu fiicnaan doontaa.
Ha qaadan shaqo haddii aad ogtahay inaadan awoodin inaad ku qabato waqtigeeda maadaama ay dhaawaceyso kalsoonidaada qoraa ahaan.
Markay timaaddo qorista, waxaad u baahan tahay inaad miiska soo dhigto dhinaca hal -abuurkaaga. Mid ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsaha badan ee lagu waayi karo macmiilku waa in la soo gudbiyo shaqo khaldan. Macmiilku wuxuu bixiyaa beddel shaqo tayo leh.
Ha koobin nuxurka dadka kale si aad ula kulanto waqtiga kama dambaysta ah. Hubi inaad waqtigaaga ku bixiso cilmi baaris si aad u abuuri karto waxyaabo tayo leh.
Macaamiishu waxay sida caadiga ah ku socodsiiyaan maqaallada aad qorto iyaga oo isticmaalaya sooftiweerka hubinta been-abuurka si ay u xaqiijiyaan in shaqadu tahay mid asal ah. Sidaa darteed adiga ayay kugu xiran tahay inaad tusto macaamilka gaarnimadaada.
Dunida qorista madaxbanaanidu waxay lahayd niyad jab badan. Tusaale ahaan, waxaad u qori doontaa talooyin badan macaamiisha mustaqbalka. Si kastaba ha ahaatee, qaar, haddii aanay badnayn, ayaa diida dalabkaaga. Sababtoo ah qoraa gaar ah oo u maleeya inaadan aqoon u lahayn micnaheedu maahan inaadan ku filnayn.
Waxaad u baahan tahay inaad barato sida loo isticmaalo dhaleeceynta si loo dhiso astaantaada. Ha quusan haddii aad hesho dib -u -eegid xun ama qiimeyn. Sii dadaal, sii wad barashada. Dhawaan waad ladnaan doontaa.
Haddii aad raadinayso inaad lacag caddaan ah oo dheeraad ah samayso ama aad qoraal u rogto shaqo waqti-buuxa ah, aaladaha qorista ee madaxa-bannaan ayaa kaa caawin kara inaad hesho shaqada aad raadineyso.
Nidaamyadan iskood u shaqeystayaasha ah ayaa sidoo kale ah kheyraad weyn oo loogu talagalay dadka raadinaya inay shaqaaleeyaan shaqaalaha madaxa -bannaan si ay shaqadooda u qabtaan.
Wakaaladaha wax qora sida The Writer Finder ayaa gacan ka geysanaya isku -xirka qorayaasha madaxa -bannaan iyo shirkadaha raadinaya inay dhajiyaan abuurista maadada. Hay'adahani waxay kaydiyaan xogtaada waxayna si joogto ah kuugu wargeliyaan fursadaha cusub. Kaliya iska hubi inaad had iyo jeer ogtahay marka fursad cusub ay ku habboon tahay xirfadahaaga.
Sida Loo Noqdo Qoraa Madax Banaan - Dhaqaale Talent - Barasho Iftiimiya
Inta badan dadka aan farsamada ahayn ma yaqaaniin sida loo sameeyo app, laakiin marka dadku ogaadaan habka, waxay ...